RASMI: Kooxda Manchester City oo ku guuleysatay ganaaxii labada sano ahaa ee laga saaray Champions League – Gool FM
(Manchester) 13 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa si rasmi ah ugu guuleysatay ganaaxii labada sano ahaa ee laga saaray tartanka UEFA Champions League.
Maxkamadda Garsooraha iyo khilaafaafka Isboortiga ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan CAS ayaa ku dhawaaqday go’aankii ay ka gaartay kiisii Manchester City looga mamnuucay ciyaaraha Champions League muddo labo sanadood ah, waxaana uu noqday mid ay ku guuleysatay Kooxda Sky Blue.
Bishii Ferbaayo ayaa xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA waxa uu kooxda Manchester City ku riday ciqaab adag oo ah inay labo sanadood mamnuuc ka yihiin ka soo qeyb-galka Champions League, isla markaa ay taha inay bixiyaan lacag dhan 30 milyan oo euro oo ganaax ah.
Waxa uu xiriirka UEFA ku dooday in kooxda Manchester City ay gashay dambi aad u xun, isla markaana ay meel kaga dhacday sharciga dhaqaale wanaagga ee FFP, iyagoo been ka sheegay dakhligooda, si been abuur ahna u buunbuuniyey heshiisyo ay la galeen shirkado.
Intaas kaddib kooxda Man City waxa ay go’aansatay inay racfaan u qaadato Maxkamadda Garsooraha iyo khilaafaafka Isboortiga ee CAS, iyadoo rumaysanayd inaysan haba-yaraatee wax qalad ah sameynin, waxaana dhegaysiga dacwaddda oo ay u diray sharci yaqaanno khubaro ah lagu soo gabagabeeyey saddex maalmood oo dhegaysi ah, waxaana la dhegaystay bishii hore.
CAS ugu dambeyntii waxa ay maanta shaacisay go’aanka dacwadda loo haystay Man City, iyadoo kooxda uu hoggaamiyo tababare Pep Guardiola ay heshay warkii u wanaagsanaa, waxaana loo ogolaaday inay ka qeyb geli karaan tartanka Champions league xilli ciyaareedka soo socda.
Bayaanka ka soo baxay Maxkamadda CAS ayaa meesha looga saaray ganaaxii UEFA ay ku ridday Man City ee labada sanadood ay kaga joojisay ka qeyb-galka Champions League, waxaana haatan Citizens kooxda lagu naynaaso ay ka qeyb-geli kartaa tartanka kooxda Yurub labada xilli ciyaareed ee soo aaddan.
Intaas kaliya ma’ahane Man City sidoo kale waxa ay Maxkamadda CAS ka fududeysay ganaaxii lacageed ee ay ku ridday UEFA, taasoo ahayd 30 milyan oo euro, waxaana kaliya laga dhigay inay kooxda reer England bixiso 10 milyan oo euro.
Bayaanka ka soo baxay Maxkamadda CAS ayaa u dhignaa: “Kaddib dhegaysiga dacwadda, Guddiga CAS waxa ay soo afjareen, soona gabogabeeyeen go’aanka dacwaddii soo gaartay 14-ka bishii Febraayo 2020.
“Waxa ayna Guddiga racfaanku soo saareen in kiiskii hore meesha laga saaro oo lagu bedelo 1- in Kooxda kubadda cagta Manchester City ay jabisay qodobka 56-aad ee laysinka kooxda iyo sharciga dhaqaale wanaagga FFP iyo 2- in Kooxda kubadda cagta Manchester City ay bixiso ganaax 10,000,000 Euro ah (Toban kun oo euro ah) oo ay ku siiso UEFA 30 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa maalinta go’aanku soo baxay.”
Si kastaba ha noqotee in ganaaxa laga qaaday Manchester City ayaa ka dhigan in saddexda kooxood ee Manchester United, Chelsea iyo Leicester City midkood ay seegi doonto ka qeyb-galka tartanka Champions League.